नेपालीको लागी खुशीको खबर चीनमा रहेका कुनै नेपालीमा पनि कोरोना भा’इरस देखिएन” – Life Nepali
नेपालीको लागी खुशीको खबर चीनमा रहेका कुनै नेपालीमा पनि कोरोना भा’इरस देखिएन”
काठमाडौँ। कोरोना भा’इरसको महामारी फै’लिएपछि उत्तरी छिमेकी मुलक चीनबाट नेपालीहरुलाई शनिबार उ’द्धार गर्न वायु सेवा निगमको विमान चीनको वुहान पुगेको छ। हुवेई प्रान्तमा रहेका १८० जना नेपालीलाई शनिबारै वायु सेवा निगमको वा’इड बडी विमानले काठमाडौं ल्या’उने छ। यसरी उद्धार गर्न ला’गिएका नेपालीहरुले सा’माजिक स’ञ्जालमा केही तस्वीर, भिडियो शेयर गरेका छन्। सौरभ लुँ’इटेल नामका एक व्यक्तिले वि’मानस्थलमा बोर्डिङ पास लिन लागिएको भन्दै भिडियो, पोस्ट गरेका छन्। उनले स्थानीय सयमअनुसार ८ बजेबाट लगेज हेल्थ जाँच हुँदै गरेकोसमेत बताएका छन्।
अर्का डा.जीतसिंह भण्डारीले पनि केही तस्वीर शेयर गरेका छन्। विमानस्थलमा उनीहरुको पहिलो चरणको स्वास्थ्य परीक्षण भइसकेको छ। पहिलो चरणमा १८५ विद्यार्थी कसैलाई पनि संक्रमण देखिएको छैन। १८५ मध्ये १४३ छात्र छन् भने तीनजना बच्चासहितका ४२ छात्रा छन्। उनीहरु सबै वुहान आसपासका सहरबाट विमानस्थ’ल आएका हुन्। चीङचउ, चीङमन, वनसी, शयान, यिथाङलगायत सहरबाट उनीहरु’ बस चढेर विमानस्थलमा आइपुगेका हुन्।
कतिपय विद्यार्थी वि’भिन्न ठाउँको परीक्षण पार गर्दै उनीहरु एयरपोर्ट आइपुगेका हुन्। कतिपयले एयरपोर्ट आइपुग्न १२ घण्टाको बस यात्रा गरेका छन्। १८५ नेपालीम’ध्ये १७९ जना विद्यार्थी हुन्। एकजना भने कामदार भि’सामा चीन गएका नेपाली हुन् भने अ’न्य चारजना चीन घु’म्ने क्रममा वु’हान पुगेका थिए। उनीहरुको सा’थमा तीनजना बालब’च्चासमेत भएको प’इचिङस्थित नेपाली दू’तावासका उपप्रमुख सुशील ल’म्सालले जानकारी दिए।
Previous कैलालीमा एक महिलाले जन्माईन् ति’म्ल्याह छोरा, उपचारमा आर्थिक अभाव
Next आफ्नो मोबाइल नम्बर कस्को नाममा छ ? नम्बर कसरी थाह पाउने कलफरवार्ड कसरी गर्ने ? हेर्नुहोस सबै जानकारी